koowheel ukuze Nikelani ngesikhathi Hong Kong Global Imithombo Consumer Electronics Show 2019
isikhathi Iposi: Mar-14-2019
koowheel, ehamba phambili umhlinzeki global of short-ibanga wokujikeleza izixazululo, uyahamba ukwethula ngesikhathi Hong Kong Global Imithombo Consumer Electronics Show, omunye electronics imibukiso yezokuhwebelana esikhulu kunazo zonke emhlabeni aphethwe e-Hong Kong kusuka April 11- 14, 2019. koowheel idokodo: 2F36 Funda kabanzi »
Lokhu Koowheel Electric self ngokulingene isikuta E1 ungukukhanya kodwa lisebenza, patent Innovative imfashini design cool, ukubonisa LED isikrini ngokuphelele ukukhombisa ibhethri nesivinini, super ukushaqeka zokuncishiswa iraba 8inch ithayi elimpontshwayo. Ngaphandle kwalokho, eligoqiwe futhi baphathe kalula. Nokho, kungaba ukunikeza identi ...Funda kabanzi »
Kube ngabhekana nezimfashini ukuthi babenezinkinga uhlelo kwebhetri futhi ibhodi kwangaphakathi ukubanjwa ukuxoshwa. Ibhodi nayo bazilungiselela nge ophendulayo ingcindezi izinzwa nomaphi lapho usuzoya shift isisindo sakho. Lapho egibela Swagtron, 1st isinyathelo unyawo ngesikhathi kusuka emuva. Uma kwenzeke ukuba bencike ba ...Funda kabanzi »
Lapho onobuhle eyinhloko ibonakale itholakala emakethe, babethunjiwe kwamukwa nabo kuphela okufanele isetshenziswe njengoba ezokuthutha bomdabu, ukuzidela okukhulu uma wayefuna ukuya kamngane, uya esikoleni esiphakeme, noma enye beya. Lokhu esheshayo skateboard kagesi iza ezingemuva disc ukubopha, pneumati omkhulu ...Funda kabanzi »
Kufanele nazi lokhu ngaphambili kokuthenga E-skateboard
isikhathi Iposi: Mar-09-2018
Imuphi umbuzo okufanele kubhekwe? Yiqiniso Safety yayo. Ngakho, thina Koowheel skateboard kagesi umphakeli usuthole CE, RoHS, FCC UN38.3 izitifiketi. Njengengubo nje imoto noma ibhayisikili, lezi skateboard kagesi ngaphezu kwalokho kufanele kube kahle-zigcinwe ngenhloso ukusebenzisa bushelelezi. Uma kungenzeka ...Funda kabanzi »
Ngokuphathelene ukwakha we skateboard, ungase kudingeke nokuba acabange ezinye izici ngendlela. Uma uthanda la umqondo wezwe elingaphansi skateboard kagesi, kodwa athande ukusetha kwakho samanje, udinga sibheke Eon: esiyinhloko Modular powertrain kagesi. Ezweni okusheshayo kuhambisane nesivinini sokufunda komfundi efana neyethu, ...Funda kabanzi »
Ukuthenga Quality Good Cool Electric Skateboard
isikhathi Iposi: Mar-02-2018
Ibhethri uyala ngokugcwele amahola angu 2-3 ukufunda, sithembele kangakanani ukuthi akhanywa. Ungase ivale noma uvula isandla sakho kakhulu ngendlela ofuna, ngaphandle kokukhathazeka ngakho ewayo noma endizayo kude. Kunalokho, akukho nolulodwa kwamaseli "ephezulu" eziningi yayithwala ukuthi kwaba eduze capacit ukalwe ...Funda kabanzi »
Ngabe ufuna ukuya travel kule entwasahlobo?
isikhathi Iposi: Feb-28-2018
Spring uyeza maduze, ongathanda uhambo ngasiphi isikhathi? Noma ufuna ukuphuma futhi uhlole imihlaba ehlukene? Ingabe ufuna ukunikeza wena noma umkhaya iholidi umxhwele futhi ephelele? Uma impendulo inguYebo, sicela ukhethe libalele ukuphuma, khona-ke kuyobonakala ngelinye kwenkundla ezingalindelekile ekupheleni ...Funda kabanzi »
Longest Journey ngu Electric Skateboard
isikhathi Iposi: Feb-23-2018
It ukuya ukuze afinyelele eqophelweni lapho kuthatha emisha engathí sina ugqame ngaphakathi kagesi skateboard endaweni; ongakhetha efana okuzivuselela unyathela amabhuleki kanye-wheel izinjini. Wireless ukulawula ezikude wawungase ubhekwe kancane ezingeni ababuthakathaka uma lenziwa plastic esilula futhi kuyangijabulisa sasivumela che ...Funda kabanzi »
Ngokuvamile, ngenxa ubukhulu nesisindo skateboard ethwele kubo kuyindaba. ikakhulukazi yethu abasebenzi eJalimane ezisekelwe Kwase kuyisikhathi eside ngilithanda nelukuluku lokwazi "electro-ukuhamba", okuyinto kuyinto ekhathazayo kakhulu kwezepolitiki eJalimane futhi ngempela kuwo wonke amazwe wonke eYurophu. Sinikeza prime-notch umthengi engasiza ...Funda kabanzi »
I Kumalula Electric Skateboard emhlabathini
isikhathi Iposi: Jan-25-2018
Sacabanga nangabafowethu-cishe ingxenye eyodwa yezindlela ezingcono kakhulu ukugcina ukungezwani esebenzayo idrayivu chain. Akubona bonke hoverboard kodwa kuphela lezi hoverboards Electric iyiphi izitifiketi ezifanele avikelekile ukusebenzisa - lokhu kufaka zonke eliphakeme 10 hoverboards engcono ezibalwe ngezansi. Basuke kunjalo kokuba de ...Funda kabanzi »
Kufanele ukwazi ngaphambi uthenga i Hoverboard
isikhathi Iposi: Jan-19-2018
Nge zobuchwepheshe self sekulinganisa su, steadiness double nge gyroscope esakhiwe-futhi amandla adonsela phansi inzwa, kulula kakhulu ukuba alawule, nje ushintshe isimo somzimba wakho isisindo inhliziyo, isithuthuthu yakho ngeke kalula uthumele phambili, emuva, kwesokunxele, kwesokudla, ngisho ujike 360 ​​diploma endaweni. Esinye sezipho ezinhle kakhulu fe ...Funda kabanzi »
Abahlukile Different Self Ukulinganisela Izikuta
I udoli kufanele uzimisele njengoba ngamunye izinga motor. Yebo, kuzoba intengo wena imali eningi, kodwa ukuthatha look at the ukwakhiwa, kanti izinga bodwa yokwakhiwa kwalesi umfana eziyingozi, ubhekene ishiywa ezibuza ukuthi noma cha it is a transformer ecashile. rech Kalula ...Funda kabanzi »
I Kujabulise Iningi Hoverboard Ukulinganisela Izikuta 2018
Kanye, le isikuta kagesi iza ngemibala ehlukahlukene futhi zingenza ukuhlobisa nge Isitika okuyinto ezuzisa cowl imihuzuko ukuthi pops up njalo. Yiqiniso, kungcono uhlobo ezingase ukusheshisa ku-nomaphi lapho uya khona ukuthi kuhloswe ngaso ngaphakathi cha ...Funda kabanzi »
isikhathi Iposi: Dec-27-2017
The Electric Skateboard kuyoba Cool Christmas Gift e 2018?
isikhathi Iposi: Dec-22-2017
Christmas uyeza maduze. Yini isifiso sakho ngonyaka omusha? Ingabe ufuna isipho cool futhi imfashini abangane noma imindeni yakho? Mhlawumbe uke zagcwala ezinye ithoyizi phezulu isifiso-uhlu zonke-azungeze imibono omkhulu isipho ke abasuke bengakakwazi ukuthola isipho ekahle? Uma ufuna som ...Funda kabanzi »
Kunoma zemoto kagesi, zikhona eziningana izinhlobo eyinhloko braking- ashukumisayo, friction, nokuhlale unyathela amabhuleki, okuzivuselela. Bonke ukusebenzisa izindlela ezahlukene okwehlisa imoto phansi. Friction braking friction amabhuleki kukhona uhlobo olufanayo amabhuleki ukuthi ezisetshenziswa izimoto ezivamile. Ngokuyisisekelo, ngomshikisho agai ...Funda kabanzi »
The Best Electric Skateboard nojosaka Ukuze IBhodi Yakho
isikhathi Iposi: Dec-06-2017
Ngokuvamile ungafuni ukuba uthwale amabanga yakho kagesi skateboard eside ngesandla, futhi ubhaka ibhodi kungenza kube lula kakhulu ukwenza kanjalo. Nge ubhaka ibhodi, ungase futhi ukhululeke baphathe ibhodi yakho ukusebenza ngesikhathi ekuseni yezimvula namanje ukuyigibela emuva ekhaya lapho kungcono sunnier kusihlwa. Th ...Funda kabanzi »
Okuhle Self Ukulinganisela Scooter Nge APP
isikhathi Iposi: Nov-30-2017
Kukhona hoverboards eziningi ezingekho emthethweni laphaya kuyatholakala emakethe, futhi uncamela ukuze uqinisekise ukuthi uyoba munye lapho ivikeleke ukugibela wena noma izingane zakho. Lezi hoverboards ayatholakala kusukela amafemu ohluke ngokuphelele ngobukhulu ezahlukene futhi ifomu ukuze bahlangabezane nemfuneko umuntu. I ...Funda kabanzi »
isikhathi Iposi: Nov-29-2017
skateboard Electric zingashintsha beya yakho
isikhathi Iposi: Nov-03-2017
Njengoba abantu ejwayelekile eziphilayo siyaqhubeka sikhula, abantu abaningi bakhetha ukuphishekela ukuphila imfashini kakhudlwana futhi elula. Ikakhulukazi Youngers, afisa ukuhlola okwengeziwe izinto ezintsha futhi kujabulise. Ngakho, banalo funa ephakeme elifushane ibanga travel amathuluzi. Ngakolunye uhlangothi, bangajabulela ukuguqulwa ...Funda kabanzi »
China Outdoors Zemidlalo Electric Self Ukulinganisela Izikuta
isikhathi Iposi: Oct-27-2017
Lokho kungenxa yokuthi lezi ukuhamba amagajethi siqu azihloselwe kude, Nokho sibaphatha yakhelwe ukwenza kokuhamba emifushane elula futhi ephumelelayo owengeziwe. Ukusiza i-bluetooth ejabulela umsebenzi amafoni emihle kanye ezahlukene stereo play amayunithi. Kanye nalezi zici, lokhu hambisa phezulu ...Funda kabanzi »
Lokho kuyiqiniso ngokuphelele, lapho ethi siphelela esiyingqayizivele, kukhona uhlobo olufanayo ngakho eyaziwa ngokuthi iOS e emakethe kakade. Lezi Scooters kagesi ngesandla khulula noma skateboard kagesi kungenziwa ngayiswa izindawo million, akunandaba ukuthi yini le mibhobho. Koowheel inguqulo entsha Electric ...Funda kabanzi »
Ububanzi ingenye ukucabangela ebalulekile kuyilapho ukukhetha imoto kagesi sikagesi. Self ngokulingene isikuta izimoto ongaphakeme-speed, nazo zonke okuthengiswayo engaqhathaniswa ezifanayo. Yasungulwa ngu Koowheel, le Hoverboard K7 is nelungelo lobunikazi njengoba "ezimbili-wheel, self-kulinganisa car.R yangasese ...Funda kabanzi »
Sawubona ~ Ngenxa Koowheel isizukulwane 2nd skateboard kagesi Kooboard iyona skateboard wokuqala kagesi empilweni yami, futhi kwakuqabukela bachithe imali ukuthenga onjalo ithoyizi ezibizayo (Ngaphezu, ngithenge ibhayisikili umzila nge "imbangela ezinhle" ...) ngakho ngangizimisele ukuya epaki. Mina ngangikini painf kakhulu ...Funda kabanzi »
Kanye skateboard kagesi ziyashisa ezifudumele intsha yesimanje, inqobo nje ngumnikazi esihle ibhalansi Electric ibhodi, aba maningi amathuba okuba ukwenza DIY ngalokho okuthandwa zabo siqu. Muva nje ngiye ukuthola ezinye cool skateboard DIY ku-Instagram. Pace: A okusheshayo E-longboard kuzosiza ...Funda kabanzi »
The Best Hoverboard Self Ukulinganisela Scooter 2017
isikhathi Iposi: Septhemba-19-2017
Isizathu ngokubiza self sekulinganisa isikuta ngokuthi "Hoverboard" wukuthi kuyilapho ugibele, kubukeka sengathi phezulu eziningana amayintshi ngenhla ngezansi. Khumbula ukugcina nabo emhlabathini. Lena indawo enhle kakhulu ezimbili-wheel self ngokulingene isikuta kagesi ukuthi ilungele ukunikeza indlela ngaphezulu ...Funda kabanzi »
isikhathi Iposi: Septhemba-12-2017
Omkhulu Kunabo Holiday Trip Ithuluzi-Kooboard ukuphila cool
isikhathi Iposi: Septhemba-05-2017
I "E-ibhodi" okwamanje kuyatholakala emakethe kuphela ukulingisa nokuhamba kwezindikimba ethandwa, amabhodi oqanjiwe. Manje siyabona ukuthi abantu abaningi ngokwandayo ukuwa othandweni leli thuluzi travel. Muva nje, esinye China phezulu emihlanu inkampani hoverboard brand ayakhula isizukulwane 2nd longboard kagesi ...Funda kabanzi »
isikhathi Iposi: Aug-29-2017
I hoverboard owamukelwa abantu abangaphezu abasebasha, ngoba yazuza angenamkhawulo ujabule futhi ngajabulela ku ugibele hoverboard, kodwa ungakhetha kanjani uphephile isikuta self ngokulingene? Manje ake kimi ukuncoma ezintathu ephephile futhi engcono self sekulinganisa isikuta kuwe. Eyokuqala iyona KOOWHEEL brand Self Balanc ...Funda kabanzi »
isikhathi Iposi: Aug-15-2017